Yakanakisa PLA Straw Manufacturer uye Fekitori | Huanna
Huswa hunogadzirwa nemupfudze, kana mashanga ePLA ndiyo nzira inonyanyo shandiswa yekushandura zvinhu uye inochengetedza zvakatipoteredza kune mashanga epurasitiki. Iwo anogona kuve eakaberekwa mavambo uye nemaindasitiri akaomarara. Muchokwadi, polylactic acid inozivikanwa sePLA inozivikanwa seyakagadziriswa mhinduro uye inotsiva plastiki.
Zvinhu: PLA Zita Rekushandisa: NATUREPOLY
Pasuru: 10000pcs / katoni Chimiro: Yakananga, kukotama, kunongedzwa
Saizi: 6mm * 21mm, 8mm * 21mm, inogadziriswa Certification: EN13432, OK manyowa, CE / EU, LFGB, SGS
Feature: Disposable Eco Shamwari Yakachengetwa Biodegradable Kupa Mazano: 50000000 Piece / Pieces pavhiki
Rudzi rwePurasitiki: Polylactic Acid Chiteshi Chekutumira: Shanghai
Kavha Details: OPP bhegi, Compostable bhegi, bhokisi kana yakagadzirirwa
Chokwadi, PLA ine bio-based uye biodegradable, inogadzirwa kubva kune inogadziriswazve zviwanikwa senge chibage starch, shuga, kana mbatatisi. Iyi ndiyo imwe nzira yekudyira / yekumabhawa nyanzvi dzichitsvaga kutenga isingadhuri eco-hushamwari mashanga.
Tinopa mashanga akasiyana siyana kusangana nezvinodiwa zvako: 5mm bendy mashanga e cocktail, 12mm yakanongedza mashanga eiyo bubble tii uye nezvimwe zvakawanda, nekuti tinogona kuzvisarudzira zvaunofarira.
"Kana muchitsvaga kwekutenga mashanga ePLA nemutengo wakaderera uye nesarudzo yakafara, ivai nechokwadi chekutaura nesu."
Isu tinogara tichingokupa iwe nekuremekedza basa revatengi, uye akasiyana mawadhi ekugadzira uye masitaera ane akanakisa zvinhu. Uku kuyedza kunosanganisira kuwanikwa kwezvakagadziriswa dhizaini nekukurumidza uye kutumira. Tinogamuchira nemwoyo wese vakaroorana kutaurirana bhizinesi bhizinesi uye kutanga kubatana. Isu tinotarisira kunamira maoko neshamwari dzepedyo mumaindasitiri akasiyana kuti tibudise yakajeka nguva refu. Kwemakore anopfuura gumi ane ruzivo mune izvi zvakamisikidzwa, kambani yedu yakawana mukurumbira wakakwirira kubva kumba nekune dzimwe nyika. Saka tinogamuchira shamwari kubva kumativi ese epasi kuti vauye kuzotibata, kwete chete kune bhizinesi, asiwo zvehukama. Ndapota usanzwa kusazeza kutisangana nesu paunenge uchida.
Pashure: PLA Mukombe & muvharo
Biodegradable epurasitiki uswa
Green Plastic mapfunde
Ini Handisi Plastic Pla Uswa
Pla Biodegrad Uswa
Pla uswa Biodegradable
Pla mashanga Biodegradable
Plastic Kunwa mashanga